अब पुरुषका लागि पनि गर्भनिरोधक खोपको विकास Canada Nepal
मंसिर १७ २०७६
भारतका वैज्ञानिकहरुले पुरुषका लागि गर्भ्निरोधक खोपको विकास गरेका गरेका छन् ।
उनीहरुका अनुसार खोपमार्फत मेल कान्ट्रोसेप्टि गरिने यो विश्वमै पहिलो खोप हो । यो खोप इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च अर्थात आइसिएमआरले विकास गरेको हो ।
आसिएमआरका वैज्ञानिक डा. आरए शर्माका अनुसार यो खोप एक पटक लगाएपछि १३ वर्षसम्म काम गर्ने छ ।डा. शर्माका अनुसार खोप परीक्षण भारतको दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मु, पञ्जाब र राजस्थानमा गरिएको थियो ।
उक्त परीक्षणमा सहभागी पुरुषहरु सबैको पहिला नै दुई बच्चा थिए । डा. शर्माका अनुसार आइसिएमआरले खोपको विकास र अनुशन्धान सन् १९८४ देखि नै गरेको थियो । खोपमा प्रयोग हुने पोलिमरको विकास प्राध्यापक एसके गुहाले विकास गरेका हुन् ।
गुहाका अनुसार अब यो औषधि स्विकृतिको लागि ड्रग कन्ट्रोल जनरल अफ इन्डिया (डिजिसिआइ) मा गएको छ । डिजिसिआइबाट अनुमति प्राप्त भएसँगै औषधि कम्पनीलाई औषधि बनाउन अनुमति दिनेछ ।
मंसिर १७, २०७६ मंगलवार ०३:११:०० बजे : प्रकाशित